लकडाउनले गर्दा महिला बिहानै ४ बजे देखि उठेर ४ पटक पुरुषलाइ खाना पकाएर खुवाउँदा थाके, हुन् थाले हैरान ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/लकडाउनले गर्दा महिला बिहानै ४ बजे देखि उठेर ४ पटक पुरुषलाइ खाना पकाएर खुवाउँदा थाके, हुन् थाले हैरान !
लकडाउनले गर्दा महिला बिहानै ४ बजे देखि उठेर ४ पटक पुरुषलाइ खाना पकाएर खुवाउँदा थाके, हुन् थाले हैरान !
नेपालमा लकडाउन भएको २७ दिन पुग्यो । रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा बाहिरी जिल्लामा रहेकाहरु घर फर्किएका छन् । लकडाउनपछि अधिकांशको घरमा पारिवारिक जमघट राम्रो छ । जमघटमा रमाइलो भए पनि महिलाको दैनिकी भने निकै व्यस्त भएको छ । महिलालाई घरको काम भ्याइनभ्याई भएको छ ।
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा समाजशास्त्र विषयका उपप्राध्यापक रामप्रसाद तिवारी घरको काममा महिलालाई राहत हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहांँ काम जसले जे सक्छ त्यही गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । ‘‘घरको काममा परिवारकै सहयोग र सहकार्य चाहिन्छ, सहकार्य नभए एउटालाई भार भइहाल्छ नि’’, तिवारी भन्नुहुन्छ, ‘‘महिलाहरु त्यसमा पनि जागिरे महिलालाई अझ बढी कामको बोझ छ । काममा पारिवारिक सहकार्य आवश्यक छ ।’’
विश्वले थाल्यो चु’म्बन, अङ्कमाल वा हात मिलाउनुको सट्टा नेपाली संकृतिको ‘नमस्कार’
सडक अवरुद्ध हुँदा चार जिल्ला प्रभावित सेनाद्वारा खाद्यान्न ढुवानी